Umaki: i-evergreen | Martech Zone
Okuqukethwe yiNkosi… Kepha Munye kuphela Ogqoka Umqhele
NgoLwesibili, ngo-Mashi 7, i-2017 NgoLwesithathu, ngoMashi 8, 2017 Douglas Karr
Uzwile isisho yonke indawo, Okuqukethwe yiNkosi. Angikholwa ukuthi lokho kuguquliwe, futhi angikholwa ukuthi kuzoke kwenzeke. Noma ngabe yizinkampani ezibhala ngemikhiqizo nezinsizakalo zazo, imithombo yezindaba etholile ebhala ngazo, imithombo yabezindaba eyabiwe yabelana ngayo, imithombo yezindaba ekhokhelwayo ibathuthukisa ... okuqukethwe okuqukethwe okuqhuba izinqumo ezinomthelela, igunya, nezokuthenga. Inkinga iza lapho wonke umuntu engaphansi kwenkolelo yokuthi okuqukethwe kwakhe yinkosi. Masibe neqiniso, okuqukethwe okuningi kuyesabeka.
Izindlela Ezi-8 Zokudala Okuqukethwe Okudala Amakhasimende
NgoMsombuluko, Februwari 20, 2017 NgoMsombuluko, Februwari 20, 2017 Douglas Karr
Lawa masonto ambalwa edlule, besikade sihlaziya konke okuqukethwe ngamakhasimende ethu ukukhomba okuqukethwe okuqwashisa kakhulu, okubandakanya, nokuguqula. Yonke inkampani enethemba lokuthola ukuhola noma ukukhulisa ibhizinisi labo online kufanele ibe nokuqukethwe. Ngokuthembela negunya ukuba okhiye ababili kunoma isiphi isinqumo sokuthenga nokuqukethwe kushayela lezo zinqumo ku-inthanethi. Lokho kusho, kudinga ukubheka ngokushesha ama-analytics akho ngaphambi kokuthi uthole ukuthi ifayela le-